Safarka - Page 2 - Geofumadas
Sawirrada iyo sheekooyinka safarka.
Fasax weyn oo ku yaal 10 + sawirro
Wax walba iyo waxa uu rabay, fasaxii Easter ayaa dhamaaday. Ma ogi haddii caruurtayda xusuusta safarkan, laakiin waxay igu dhacdaa in aan xasuusto inta badan maalmaha aabahay aabahay ku yaalo, waa marka uu i weydiistey inaan diyaariyo shandadkeyga, kabaha ciribta ...
Tijaabinta Kodak EasyShare M341
Ka dib markii aan lumiyo aniga oo Benq, taas oo hubaal ah qof dabacsan oo ku raaxaysanaya kharashka aan taxadarnahay, waxaan u tagay doorasho raqiis ah oo aan ku heli karo. Ku riyaaqaya sida qalabkaas oo aan ka badneyn US $ 150 wuxuu sameeyaa wax yaababkiisa. Guud ahaan, waxay u dhowdahay kamarad kasta oo ka mid ah waqtiyadan, iyadoo ...
Wax badan maahan. Jidka dhexdiisa Aan lahayn calaamado, calaamad lahayn, telefishin aan telefishin lahayn. Kaliya adiga, oo buuxiya hawada. oo wax walba ka sarreeya ayay wax ku dhici doonaan.
egeomates My, Leisure / waxyi, safarka
Waxaan u isticmaali jiray inaan kuu sheego inaan bilaabi lahaa tababar tababar ah isticmaalka ArcGIS 9.3, oo leh qaab dhexdhexaad ah oo weyn sababtoo ah masaafada, waqtiga yar iyo shaqooyinka ardayda. Hadda waxaan ka tagayaa gabagabada qaar: Maaddooyinka: Waxaan jeclaan lahaa in wax waliba ay fudud yihiin. Haddii ay tahay inay bixiyaan tababbar, waxay baraan tusaale ...
Fasaxyada + 10 sawiro
Ugu dambeyntii fasaxyada intiisa kale waxay soo gebogeboobaan, waxay ku qanacsan yihiin inay la joogeen qoyskeyga waqti ku filan. Dhibaatada weyn ee aan ku haysto kamaradeyda Benqq, sawirada (inteeda badan) waxay ahaayeen dadaalkii ugu wanaagsanaa ee telefoonka gacanta. Tayada waa mid xun, sheekada ka dambeysa, waxaa jiri doona wakhti aad ku iibsato mid cusub. Hubinta beerta ...
Waa la Dajiyaa ...
Wonderful ... Labada ilmo ee Keith Bentley ayaa subaxdii subaxdii liqay, markii uu u sheegay bilowgiisii ​​... waa u qalantaa safarka. Wixii imika soo bandhiga bandhigyada ayaa la sameeyey.
Socdaalka, diyaarinta fiidiyow
Waxaan ku dhawaad ​​usbuuc soconaya, iyada oo loo marayo hawsha dhamaystiran ee geeddi-socodka nidaaminta oo ka kooban filim fiidiyowga ah oo u baahan in la badbaadiyo nuxurka geedi-socodka habka loo adeegsado. Iskudaytani waa duni xiiso leh, ciyaaraha iftiiminta, madadaalada dhacdooyinkii hore, qabashada dhacdooyinka weli nool, ...
Ma jiraan jawaabo badan: Socdaal. Waxaan dooraneynaa waxa aan qabano, wax walba oo ku dhow, inkastoo aan u maleynayo in waxyaabo badan aysan ka sii darin wakhti la'aan. Waxay ku qanacsan tahay in ay aragto natiijooyin xiiso leh oo ka jira degmooyinka kuwaas oo leh ciddiyaha iyo kor u kaca oo gaari kara marka la eego maamulka dhulka. Yaanan sheegin in dhalinyarada ...
Google Earth mapserver egeomates My WordPress
Siyaabaha 10 ee lagu heli karo duulimaad gaaban
Hadda oo aan diyaarinayo safarkayga Charlotte, waxaan rabaa inaan qaato fursad aan ku tuso ugu yaraan adeeg bixiyayaasha adeega shirkadda 10 ee internetka. Muhiimada ugu weyn ee raadinta duulimaadku waa inay noqotaa khadka loo isticmaalo, si looga faa'iidaysto macaamiil fariin ah ama kaar deyn ah. Laakiin taasi maaha ...
Internet iyo Blogs, safarka
Noqo Abaalmarinta Abaalmarinta iyo Abaalmarinta
Laga soo bilaabo 12 ilaa 14 ee Oktoobar Bentley Systems waxay qaban doonaan Abaabulka iyo Abaalmarinta Hababka ugu wanaagsan ee Kaabayaasha. Munaasabaddan ayaa dhici doonta Charlotte, North Carolina, waa kan ugu horreeya ka dib isbeddelka qaabkii hore ee ka horeeyay abaalmarinta BE. Maalintii koowaad, Gregg iyo ...
Silken Hotels, raaxo iyo shakhsi
Hudheelka ayaa mar walba doonaya inuu ku qanco oo bixiyo adeegga ugu fiican; laakiin qaar ka mid ah ayaa maamula in loo aqoonsado sida ugu fiican, iyo tani waa kiiska Silsiladaha Hotel Silken, taas oo si buuxda u go'aamisay bixinta adeegga ugu fiican iyo tayada si loo gaaro joogitaan wacan. Waqtigu wuxuu ku guuleystay inuu silsiladda sameeyo ...
Qariiradaha markaad raadineyso duulimaadyo
Helitaanka Google API ma ahan wax lala yaabo in badan oo ka mid ah ganacsiyada internetka. Qeyb ka mid ah oo ay ku guulaysatay waa marka ay dhacdo iibinta tikidhada diyaaradaha ee u muuqda in ay heleen soo dhaweyn wanaagsan. Muddo ka dib waxaan tixgeliyey in adeegyadani ay ahaayeen kuwo aan loo baahneyn hawlwadeenada jira ...
Google Earth / Maps, Internet iyo Blogs, safarka
Wii, sida ugu fiican ee safarkayga
Safarkaygii ugu dambeeyay ee wiilkeyga ayaa ii raaci lahaa, laakiin tan iyo markii saaxiibadii safaaradda aan joogin waqtigii loogu talagalay, waxaan go'aansanay in haddii qunsulka Wii laga helo qiimahaas, waan isbarbar dhigi lahaa. Shakhsi ahaan ma ahan taageere badan oo ciyaaraha fiidiyowga ah ee caruurta, laakiin heysta sida adiga oo kale, oo ixtiraamaya waali ...
Shalay waxaan ka hadlayaa dareenka MicroCenter, hadda waxaan rabaa inaan sameeyo liis ah waxa aan helay wax badan oo la ii soo saari karo. Guud ahaan, sicirku si aad ah uma hooseeyo marka la barbar dhigo kuwa laga helo waddanka Hispanic, laakiin noocyada kala duwan iyo kuwa cusub waa. Qaar badan oo ka mid ah waxyaabahan ma imaan, ama ha ...
Isbedelka safarkan, waa marka laga reebo tababbarka aan maalmo badan qaatay maalmo fasax ah, taas oo i siisa wakhti aan ku soo booqdo saaxiibkii Google Earth, oo ku nool meel u dhow xarunta dhexe ee Compaq, hadda HP. Halkan waxaan ka tagaa wax dabeecadda ah ...
Dhismaha qaabka Gringo, mawjad kale
Maalin xiiso leh, ujeedada ugu weyn ee tan waxay ahayd in la ogaado farsamooyinka dhismaha ee guryaha Maraykanka. Tilmaamku wuu fiicnaaday, waxaana rajeynayaa inaan wax yar yar ku qoro illaa inta aan waqtigeyga ku jirey, kiiskan waxaan rabaa inaan diirada saaro fikradayda qaabka naxdinta leh. Hispanics waxay leeyihiin kala duwanaansho dhaqameed weyn leh ...
Ha u maleyneynin inaan sawir ka qaadayo xaruntii hore, waxaan rajeynayaa inaad furto adeegga United Airlines ee tagta Houston, oo dhan si ay uga faa'iidaystaan ​​duulimaadyada qiimaha jaban. Waa cajiib, in maanta uun, laba sano ka hor waxaan ku qoray boostada ugu horeysay ee Geofumadas. Xitaa xiiso badan, in safarkan aan dhicin, haddii aan ...
Acer Aspire blog egeomates My
Safar dheer, sawirada 10
Waxaan u safrayay dhowr maalmood, niyaddaygu wali ma dhicin haddii aan hore u soo laabtay. Laakiin halkan waxaan kuugu soo dirayaa qaar ka mid ah safarka ugu fiican ee socdaalka oo ay ka mid yihiin isdhexgalka heshiisyada marxaladdan ugu dambeeya ee loo yaqaan "sustainability". Tan iyo markii uu safar la ahaa asxaabta kale, waxaan lahaa waqti aan ku biiro mawduucyada ...